ShweMinThar: သျှမ်းအမျိုးသားတို့၏ သမိုင်းအကျဉ်း
ရှမ်းဆိုတာ မြန်မာနဲ့ အခြားလူမျိုးတစ်ချို့က သူတို့ကိုခေါ်တဲ့အမည်ပါ။ သူတို့ရဲ့ မူရင်းနာမည် တိုင်း (Tai) ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းတွေကိုယ်၌ကလည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ Tai(တိုင်း)လူမျိုးလို့ပဲ ပြောကြပါတယ်။ ရှေးမြန်မာစာအရေးအသားမှာ ရှမ်းကို သျှံ (သို့) သျှမ် လို့ရေးပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ လွတ်လပ်ခြင်းလို့ ရတယ်။ ရှမ်းနှင့် တိုင်းဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုခေါ်တဲ့ အမည်နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်တယ်။
#ရှေးဟောင်းရာဇ၀င်ထဲက ရှမ်း (သို့) တိုင်း
ရှမ်း(သို့) တိုင်းတို့ဟာ တရုတ်တို့နဲ့ လူမျိုးအရရော၊ ဘာသာစကားအရပါ သီးခြားလူမျိုးဖြစ်တယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ တရုတ်တို့ အင်ပါယာ မထူထောင်မီ ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန့်ကပင် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး စူ(Tsu) နှင့် ပန် (Pang) နိုင်ငံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဘီစီ ၈၈၀ မှာ တရုတ်အင်ပါယာပင် စူနိုင်ငံလက်အောက် ကျရောက်ခဲ့တယ်။ ဘီစီ ၇၀၀ မှာ စူနိုင်ငံ ဘုရင်ဖြစ်လာမယ့် ခွန်ဆေဟွန်ကို မွေးတယ်။ နို့စို့အရွယ်မှာပင် မိဘများဆုံးပါးသွားလို့ ကျားဖြူတစ်ကောင်နှင့် ကျားငါးဆယ်တို့ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ခွန်ဆေဟွန်ဟာ ကျားနို့ကို သောက်သုံးရလို့ အလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး စူနိုင်ငံဘုရာင်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ရှမ်း(သို့) တိုင်းတို့က ကျားစာ မိမိတို့ကို အမြဲစောင့်ရှောက်တယ်လို့ ယုံကြည်လာကြတယ်။ ကျားကို ရှမ်း(သို့) တိုင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတအဖြစ် သဘောထားခဲ့ကြတယ်။ ရှမ်းတို့ပြောတဲ့ စ၀်ခွန်မိန်းခေါ် ကိုးမြို့ရှင်ဆိုတာ ကျားမင်းနတ်အစောင့်အရှောက်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။
#နန်ချောင် (Nan Chao) နိုင်ငံ
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ပျူနိုင်ငံများကို အေဒီ ၈၃၂ မှာ တစ်ကြိမ်နှင့် ၈၃၅ မှာ တစ်ကြိမ် ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ တိဗက်နှင့် တရုတ်တို့အလယ်မှာ ရှမ်း(သို့) တိုင်းတို့ ဇာတိသွေးဇာတိမာန် ပြသခဲ့တဲ့ ကာလပါပဲ။ နောင်အခါ မြန်မာဖြစ်လာကြမယ့် ချိအန်လူမျိုးတို့ဟာ နန်ချောင်တို့ လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ပြီးမှ အေဒီ ၉ ရာစုအလယ်လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းသို့ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ မှန်နန်းရာဇ၀င်မှာပါတဲ့သူရဲကောင်းမင်း ပျူစောထီးဟာ ရှမ်းမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ ပျူစောထီး၊ ထီးယဉ်မင်း၊ ယဉ်မင်းပိုက်၊ ပိုက်သေဉ်လည်၊သေဉ်လည်ကြောင်၊ ကြောင်တူရစ်လို့ အမည်ပေးပုံဟာ နန်ချောင်မင်းဆက်မှ စီနူလို့၊ လိုရှဲန်၊ ရှဲန်လိုပီ၊ ပီလိုခို၊ ခိုလိုဖုန်း၊ ဖုန်းကျောက်ယီ၊ ယီမွန်ဆွန်လို့ နာမည်ပေးပုံတွေ တူနေတဲ့အတွက် အဲဒီမင်းတွေဟာ နန်ချောင်မင်းအဆက်အနွယ် ရှမ်းမင်းတွေဖြစ်ရမယ်လို့ ယူဆကြတယ်။
ပုဂံအပျက် ၁၂၈၈ မှ ၁၅၅၄ ထိ ကာလရခိုင်နှင့် မွန်ဒေသအချို့မှ အပဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးကို ရှမ်း(သို့) တိုင်းလူမျိုးတို့ ကြီးစိုးခဲ့တယ်လို့ ယူဆတယ်။ အဲဒီကာလက မြန်မာတို့ရဲ့ သြဇာဟာ အင်းဝလက်အောက်ခံအနေနဲ့ ပြည်နှင့်တောင်ငူနယ်ကလေးတွေလောက်မှာသာ ရှိခဲ့တယ်။ သို့ဖြင့် ပုဂံအနော်ရထာမင်းလက်ထက် ၁၁ ရာစုမှ ကုန်းဘောင်ဆက်နောက်ဆုံးဘုရင် သီပေါမင်း ပါတော်မူတဲ့အထိ မြန်မာရာဇ၀င်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် ပင်းယ၊ စစ်ကိုင်းနှင့် ပထမအင်းဝခေတ်ပျက်တဲ့ ၁၅၅၄ အထိ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ခန့် ရှမ်းတို့ တန်ခိုးသြဇာကြီးခဲ့တဲ့ကာလလို့ ဆိုရမယ်။ ကျန်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ ရှမ်းတွေဟာ မြန်မာဘုရင်လက်အောက်ခံ ပဏ္နာဆက်နိုင်ငံ (Vassal State) အဖြစ်နဲ့သာ ရပ်တည်ခဲ့ရတယ်။ သို့သော်လည်း ရှမ်းစော်ဘွားများအနေနဲ့ ကိုယ့်နယ်မှာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် မင်းများလက်ထက် ရှမ်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ အများအားဖြင့် နယ်များကိုစော်ဘွား၊ နယ်လတ်များကို မြို့စားနှင့် နယ်ငယ်များကို ငွေခွန်မှူးများ ထားရှိအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။
~Ref:ကျော်သက်ဟန် ၊ Mingalarbar Magazine, Vol. 6, No. 1, May- Oct 2014 မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ &Credit Lwin Pyin
Posted by Alex Aung at 7:19 AM